Mba ho noely lalandava | NewsMada
Mba ho noely lalandava
Irariana mba ho Noely lalandava… Mba niova tsy tahaka ny nahazatra amin’ny ankapobeny ny maro na tsy ny rehetra aza. Samy nanamarika sy nifety izany amin’ny eo an-tanany ny ankamaroan’ny olona, omaly. Eny, hatramin’ireo tsy kristianina aza. Niala amin’ny mahazatra tsy toy ny isanandro ny fiainana… Natao metimety ny fitafiana, ny sakafo, ny fihetsika sy ny fiteny fa fetin’ny Noely… Nandeha nivavaka hatramin’ny afakomaly alina, nitohy omaly. Nifampiarahaba sy nifampirary soa mba samy hahatratra ny taona vaovao sy ny Noely amin’ny taona ho avy… Nalalaka ny lalana, tsy nisy ny fitohanana. Nangina na tsy heno firy ny resaka politika, afa-tsy ireo vitsivitsy mbola niresaka izany tany amin’ny lanonana sy fety na fiarahana tany… Naresaka ny zava-maneno sy ny hiran’ireo ankizy na tanora tany am-piangonana, nialohavan’ny feon-dakolosy vao mangiran-dratsy manainga ireo mpino hamonjy ny fotoam-pivavahana… Nitohy ny tolakandro izany ho an’ny fiangonana sasany… raha nitohy koa ny fety sy ny fankalazana ho an’ny isan-tokantrano. Narahin’ny feon-javamaneno alefa ho henon’ny manodidina. Feno ny hafaliana sy ny korana… Eny anelanelany eny koa anefa ny fisotroana miafara amin’ny hamamoana satria fety hono ! Mba mitsahatra amin’ny asany hatramin’ireo jiolahy satria… teraka ny Mpamonjy. Hatrany an-dafy any amin’ny tany miady aza moa, nampirimina indray andro ny basy.
Fotoana àry ny tahaka izao, hanomezana lanja bebe kokoa ny Noely miainga amin’ny ezaky ny tsirairay mba ho zary tsirim-panantenana izany ka hahatonga tokoa ny hafaliana vokatry ny fahatongavan’ilay Mpamonjy hipaka any amin’ny fiainan’ny fiaraha-monina sy ao am-pon’ny tsirairay. Hananantsika toe-po sy toe-tsaina mahay mifampizara sy mifanome eo amin’ny fiaraha-monina sy ny manodidina. Ho azo antoka amin’izany ny tena fahatongavan’ilay Mesia ka hampanaiky antsika ho sahy hiatrika ny fiainana hanafoana ireo aretina mamely antsika sy ny fiarahamonina. Anisan’izany ny kolikoly, ny tsy fandriampahalemana, ny fitiavan-tena, ny fiketrehana tombontsoa manokana…
Aza hadinoina fa natao hotahafintsika ilay zaza teraka tao an-tranon’omby. Ny toetrany, ny fomba fiainany, ny fahaizany mifandray sy miresaka amin’ireo olobe teo anivon’ny fiaraha-monina. Teo koa ny fomba fampianarany sy fampitany hafatra, tokony ho fakan-tahaka ho antsika. Koa ny fetin’ny Noely àry, tsy handalo fotsiny na isehosehoana ivelany fa natao hampieritreritra ho an’ny rehetra… Ka mba ho Noely lalandava tokoa anie !